यसकारण साउन महिनाभर मासु र मदिरा वर्जित छ ! « Lokpath
काठमाडौं । साउन महिनालाई धार्मिक महिनाको रुपमा लिइन्छ । यो महिना वर्षकै सबभन्दा पवित्र महिना मानिन्छ । साउनमा विशेष नियमहरूको पालना गर्ने परम्परा शताब्दियौंदेखि चलिआएको छ । यस्तै महतवपूर्ण नियम हो मासु र रक्सीको सेवन नगर्ने।
आखिर किन साउन महिनामा रक्सी र मासु नखान भनियो त ? यसको धार्मिक र वैज्ञानिक कारणका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौं ।
यसै पनि हिन्दू धर्ममा मद्यपान र मांसाहारलाई राम्रो दृष्टिले हेरिन्न । त्यसै पनि साउनजस्तो पवित्र महिनामा त यिनीहरूको सेवन वर्जित नै छ ।
जाँड रक्सी लगायतका मद्यपान जुनसुकै बेलामा पनि पिएको नराम्रो हो । स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्ने भएका कारण यसलाई साउन महिनामा पनि वर्जित गरिएको हो । साउन महिनामा मानिसहरुले भक्तिभावले व्रत पूजा आराधना गर्ने नियम नखल्बलियोस् भनेर पनि यसको प्रयोग वर्जित छ ।
माछा मासुको कुरा गर्दा साउनमा बादल लागेर हाम्रो शरीरले सूर्यको प्रकाश राम्ररी पाउँदैन । यसले गर्दा हाम्रो पाचनशक्ति कमजोर हुन्छ र मासुजस्तो छिट्टै नपच्ने कुरा लिँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौँ समस्या आइलाग्छन् ।
बर्खाको मौसममा पशुहरूलाई अनेकौँ किसिमका संक्रामक रोग लाग्छन् र त्यस्ता रोगी पशुको मासु खाँदा रोग सर्छ । त्यसैले साउन महिनामा यी दुई कुरा वर्जित गर्न भनिएको हो ।
प्रकाशित मिति: २०७८,श्रावण,८,शुक्रवार ०७:४८
यस्ता ड्राई फ्रुट्सको सेवनले मधुमेह नियन्त्रणमा गर्छ